Global Voices teny Malagasy » Fihaonana voalohany nikarakarana ny Jatta Wöötanö tao Boca de Ninchare · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Jona 2019 12:34 GMT 1	 · Mpanoratra Fernando Carias Nandika (en) i Fernando Carías, Sylvia Aimée
Sokajy: Mediam-bahoaka, amazonia, jatta-wootano, vatsiana, Rising Voices
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Novambra 2014)
Fanavaozam-baovaon'ny Tetikasa Vatsian'ny Rising Voices
Fampiasàna ny aterineto any anaty vondrom-piarahamonina. Sary natolotry ny tetikasa
Anatin'ireo atrikasa fiomanana mialoha ny tena fiofanana hatao ao Boca de Ninchare, notontosain'ny tarika avy amin'ny tetikasa niaraka tamin'Ing. Enrique Caura kapitenin'ilay vondrom-piarahamonina ireo andiana fivoriana vitsivitsy tany amin'ny vondrom-piarahamonina Maripa ao amin'ny faripiadidian'i Sucre ao amin'ilay fanjakana Venezoeliàna any Bolívar. Natao indrindra ny fivoriana mba hifankazarana amin'ilay tetikasa ho atolotra sy hisaintsainana momba ny maha-tena ilaina ny hetsika tahaka itony any anatin'ireo vondrom-piarahamonina indizeny.
Tao anaty fifanakalozan-kevitra naharitra ela dia ela, nilaza taminay ny lehiben'ny Caura fa marobe ireo tanora indizeny no mikirakira teknolojian'ny fampitambaovao sy ny fifandraisandavitra, ary hoy izy:
Tsy misy na iray aza tanora eto ka tsy manana farafaharatsiny iray amin'ny finday izay maoderina indrindra. Afaka hitanareo eny rehetra eny ry zareo mihaino mozika na maka lahatsary. Toy izany koa no mitranga raha resaka solosaina, maro no nividy iray ary mahay ny fomba fampiasàna azy ireny tsara.
Noresahanay ihany koa ny momba ny fahafahana mahazo aterineto izay misy ao anatin'ilay vondrom-piarahamonina, izay tsy mandeha amin'izao fotoana izao noho ny olana ara-teknika eo amin'ny tandroka fampifandraisana. Nanolo-tena ny tarika avy amin'ny tetikasa Jatta Wöötanö hanolotra izay rehetra fanohanana ilaina hanampiana amin'ny famerenana indray ny fifandraisana. Ny fanehoankevitra avy amin'ing. Caura momba ny fampiasàna aterineto no tena nahaliana indrindra:
Rehefa manana aterineto izahay, tsy ilaina akory ny mandao ny vondrom-piarahamonina. Izaho manokana dia mahazo aina tsara rehefa tsara ny fifandraisana. Maharaka vaovao aho no sady mifandray amin'ny olona tsirairay.
Teboka iray nilaina nohalalinina ireo teny momba ny lanjan'io fitaovana teknolojika io ho an'ireo solontena avy ao Boca de Ninchare.
Olana iray hafa ny fandraisana anjaran'ireo tanora avy amin'ny Yekuna tamin'ilay fiofanana mba ho lasa mpampita hafatry ny foko. Noraisina ny fanapahankevitra hanasa ireo tanora avy amin'ireo vondrom-piarahamonina indizeny mpiray vodirindrina amin'i Boca de Ninchare, hiaraka hiasa amina tanora manodidina ny 20 eo ho eo.
Andrana nitondra zavatra niabo iny ho an'ilay tarika. Nianaranay ny nifankahafantatra tamin'ireo tena zavamisy marobe iainan'ny vahoaka Yekuana avy ao amin'ny Renirano Caura. Tena zavadehibe ny anipihana endrika sasantsasany mifandray amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harena an-kibon'ny tany, ny olana manjo ny tontolo iainana, ny tena olana ateraky ny fianahan'ny merkiora amin'ny daholobe izay misy ao amin'ny lembalemban'ilay renirano. Tsy azontsika atao anjorom-bala ireo fifanakalozan-dresaka momba ny famotehana tafahoatra ny ala any amin'ireo tany navelan'ny razambe, ny famaritana ny tanin'ireo indizeny sy izay heverina ho toy ny zaratany vaovao nateraky ny zavamisy, hatramin'ny havitsian'ireo vahoaka indizeny any anatin'ny media nomerika sy ny fampiasana azy io mba ho fikatsahana habaka hanapariahana vaovao ary ny fankatoavana sy fanajàna ireny kolontsaina ireny. Fantatray fa ny tetikasa dia hanampy betsaka amin'ny fifampiresahana sy fampitàna ireny fahasarotana ireny.
Fivorian'ny tarika avy amin'ny tetikasa Jatta Wöötanö . Sary natolotry ny tetikasa
Eo anelanelan'ny 11 sy 15 Desambra 2014 no hataonay ny fitsidihana voalohany ny ao Boca de Ninchare. Ho andro iray manontolo io, misy fitaterana an-tanety sy an-drenirano. Hisy ny fampahafantarana ny tetikasa mandritra ny fivoriana iray ataon'ny vondrom-piarahamonina mba hanomanana ny fotodrafitrasa rehetra ho an'ireo atrikasa hanomboka ny Janoary 2015.
Nadikan'ni Eddie Avila avy amin'ny teny Espaniôla, talohan'ny nadikàna azy indray ho teny Malagasy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/06/139821/